Apple Arcade နှင့်အတူဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပါပြသခဲ့သည် Androidsis
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Google သည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ပလက်ဖောင်းအသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ Stadia အဖြစ်ကြီးမားတဲ့အများစုအားဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့သည် ဟာ့ဒ်ဝဲ - အခမဲ့ဂိမ်းအတွက်အနာဂတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၌ပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများကိုစီစဉ်ထားသည့်နေရာ။
နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Apple ၏တင်ဆက်မှုအပြီးတွင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းများစွာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည် Cupertino မှသူတို့သည်လည်းဂိမ်းများကို join။ Apple Arcade မှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် Stadia နှင့်အခြားရိုးရာ console များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု.
1 Apple Arcade သည် Google Stadia နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်
Apple Arcade သည် Google Stadia နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်
သို့တိုင် နှိုင်းယှဉ်ဖို့စောလွန်းသေးသည် ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံး streaming များဂိမ်း၏။ သို့သော်အားလုံးအထက်တွင်ရှုပ်ထွေးသည် Stadia အကြောင်းအနည်းငယ်သောသတင်းအတွက်။ Google ၏တင်ဆက်မှုမှာသူတို့ဖြစ်ကြသည် ခက်ခဲတဲ့ဒေတာထက်လေထဲတွင်အများအပြားပိုပြီးမေးခွန်းများကို ဒါကြောင့်အလွန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို။
အက်ပဲလ်ဟာအနည်းငယ်ထပ်မံသွားပြီးဂိမ်းကစားသူအများစုကတစ်စုံတစ်ရာသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးဖို့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ရှင်းပါတယ် Apple Arcade သည်လစဉ်ကြေးပေးသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်တလောက်တစ်ခုလုံးရရှိနိုင်တယ် ဝန်ဆောင်မှုကန်ထရိုက်သည့်အခါအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ.
ကျနော်တို့ရေတွက်လို့ရပါတယ် အကန့်အသတ်မရှိဝင်ရောက်ခွင့် Apple Arcade ကမ်းလှမ်းသောဂိမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Google Stadia ကမျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရေးကြီးသောဟန်းဒီးကပ်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ လုံးဝဖြစ်လိမ့်မည် အဆုံးအဖြတ်ပေးသူမှာ Apple Arcade ရေတွက်နိုင်သောခေါင်းစဉ်များစာရင်းဖြစ်သည်။ မနေ့ကတင်ဆက်မှုမှာကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းငါတို့ပြောခဲ့တယ် 100 အထိသီးသန့်ဂိမ်း, ဘာမှမရှိဘူး။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ဒီပလက်ဖောင်းဖြစ်လိမ့်မည် Apple ဂေဟစနစ်ရှိပစ္စည်းအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ တတိယပါတီကိရိယာများနှင့်အနာဂတ်လိုက်ဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်မရှိပါ။ ငါတို့သိပေမယ့် ကျနော်တို့ Third-party ထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးနိုင်သည်အနည်းဆုံးတော့ Apple မှာကိုယ်ပိုင်တစ်ခုရှိသေးသည်အထိ။ ထိုအချက်ကိုသိ။ အချက်များဝင်ငွေ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဂိမ်းများကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲကစားနိုင်ပါတယ်.
ယခုအချိန်အထိကုမ္ပဏီများကကြိုက်တယ် Sega နှင့် Konami တို့သည် Apple Arcade အတွက်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုတက်ကြွစွာပါ ၀ င်ရန်သေချာစေခဲ့သည်။ Apple သည်အလားအလာရှိသော Stadia သုံးစွဲသူများအားပိုမိုပြည့်စုံသောကတ်တလောက်နှင့်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည့်စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်အသုံးအနှုန်းများကိုခြစ်ရာချနိုင်မည်လား။ ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံသယအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အက်ပဲလ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို Apple Arcade ဖြင့်ပစ်မှတ်ထားနေသည်
Apple Music သည် Chromebook များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်